Amakhasino Eselula Iningizimu Afrika 2022 - Amabhonasi Eselula
Ikhaya / amakhasino eselula
Amakhasino eselula kanye nemidlalo yeselula kusesekusha eNingizimu Afrika, kepha ukuthandwa kwawo sekuphindwe kabili kule minyaka emibili edlule. Ikhasino yeselula uhlelo olisebenzisayo ukudlala imidlalo yekhasino eku-inthanethi kuselula yakho, noma njengoba thina baseNingizimu Afrika sikubiza: iselula.
Imakethe Yamakhasino e-inthanethi ithole umfutho ngesikhathi elinye lamabhange ethu amakhulu: i-First National Bank, liqala ukwamukela izinkokhelo eziku-inthanethi ngeselula. Basebenzisa uhlelo lwe-Cell Pay Point olukuvumela ukuthi udiphozithe imali ekhasino oyithandayo. Le ntuthuko entsha iyizindaba ezinhle kubo bonke abalandeli nabadlali bekhasino yeselula, ngoba besivunyelwe kuphela ukudiphozitha imali ngamakhadi e-debit nawezikweleti esikhathini esidlule.
100% Ize ifike R2.000 Ibhonasi + 20 ama-spins Ayikho Idiphozithi
Yini Okudingayo Ukudlala Amakhasino Eselula?
Ukuthuthuka okusha kwezobuchwepheshe nokukhuphuka kwamanethiwekhi e-3G asezingeni eliphezulu namadivayisi aphathwayo kusho ukuthi wonke umuntu oneselula entsha angabamba iqhaza. Iselula yakamuva enoxhumano lwe-inthanethi nohlelo lwe-Java yikho konke okudingayo ukuze udlale emakhasino amasha sha eselula.
Okokuqala, kufanele wazi ukuthi ezimweni eziningi awudingi ukudawuniloda noma yiluphi uhlelo lokusebenza ukuze ufinyelele kukhasino ye-inthanethi ngoba iningi lazo zingafinyelelwa ngesiphequluli seselula ehlakaniphile noma ithebhulethi yakho. Ngaphandle kwezidingo zobuchwepheshe, udinga ukuthi ube ne-akhawunti yemali yangempela hhayi kuphela yokubheja emidlalweni oyithandayo yekhasino kodwa ukuze usebenzise amabhonasi okukwamukela aphayo anikezwa amakhasino eselula.
Ukuze usebenzise ibhonasi yediphozithi engekho oyikhethile, ngaphandle kwe-akhawunti yemali yangempela ebhalisiwe, udinga ikhodi yekhuphoni enikezwe yikhasino okufanele uyifake ukuze imali yamahhala ifakwe ku i-akhawunti yakho.
Ukubheja imali yangempela, udinga ukukhetha indlela yokudiphozitha imali.
Njengelungu elisanda kubhaliswa lomphakathi wekhasino, uzonikezwa ibhonasi esekelwe ediphozithini engakhuphula ibhalansi yakho ngo-100% noma ngaphezulu futhi uma unenhlanhla yokufeza izidingo zokubheja, ungasusa imali ku-akhawunti yakho. Khumbula ukuthi amanye amakhasino anikeza imiklomelo ekhethekile.
Amadivayisi Adlala Amakhasino E-inthanethi
Sekube nokuthuthuka okukhulu kumaselula atholakala emakethe yaseNingizimu Afrika. Amafoni amaningi amasha awagcini ngokusivumela ukuba sishaye ucingo futhi sithumele ama-SMS kubangane bethu, kepha asivumela ukuthi sithathe izithombe ezinhle, singene ku-inthanethi, nokuthi sidlale imidlalo.
Imakethe yemidlalo yamaselula iqhume e-United Kingdom, lapho izakhamuzi ezisebenzisa amaselula azo kanye namadivayisi aphathwayo ukubheja emakhasino, ezemidlalo, nezemijaho. Bayanda abantu baseNingizimu Afrika abajabulela imidlalo yabo abayithandayo yekhasino ye-inthanethi kumaselula abo.
Ukuze ube nesipiliyoni esihle sokudlala uma udlala ekhasino yeselula, kubaluleke kakhulu ukuthi ukhethe ikhasino esebenza nedivayisi yakho yeselula. Ngenkathi amakhasino amaningi ehlose ukuxhasa wonke amadivayisi, ikhwalithi ingahluka ngokuya ngekhasino yeselula oyikhethile nedivayisi yakho yeselula.
Iningizimu Afrika ingelinye lamazwe ase-Afrika anezinga eliphakeme kakhulu labasebenzisi beselula ehlakaniphile ngoba bangaphezulu kwezigidi eziyi-7. Ukubheka ukuthi ngabe idivayisi yabo ephathwayo ihambisana nekhasino abayithandayo ekuxhumaneni, abadlali baseNingizimu Afrika kufanele bavakashele iwebhusayithi yekhasino futhi babheke uhlu lwamadivayisi asebenzayo.
Ngokuya ngeplatifomu abayisebenzisayo, amakhasino eselula eNingizimu Afrika asekela amadivayisi ahlukahlukene asebenza kumasofthiwe e-iOS, eAndroid, eWindows, kanye neBlackberry. Kodwa-ke, iningi lamakhasino eselula anikeza amasevisi kubasebenzisi be-Apple iPhone 4 nezinguqulo zakamuva, i-Apple iPad ne-iPad 2 kanye neguqulo yesine ye-Apple iPod touch.
Ukuze uthole ukuthi iyiphi isofthiwe ye-iOS esetshenziswa yidivayisi yakho, yiya kokuthi Settings > General > About, bese kuvela isofthiwe yedivayisi yakho kulesi sikrini.
Uma kuziwa emadivayisini e-Android asebenzayo, ungadlala nge-Samsung Galaxy S3 yakho, nge-Samsung Galaxy S4, nge-Google Nexus 4, nge-Google Nexus 7, nge-Samsung Galaxy Tab 2 7, ne-Samsung Galaxy Tab 2 10.1.
Ngaphandle kwalawa maselula, ungasebenzisa amadivayisi avela kwabanye abakhiqizi abasebenzisa isofthiwe ye-Android uma esekela i-Flash player edingekayo ukudlala amageyimu ekhasino kuselula.
Ungajabulela bonke ubumnandi nenjabulo ngenkathi udlala kumakhasino amaningi eselula uma unedivayisi ye-Blackberry noma ye-Windows-powered.
Yize uhlu lwamakhasino asekela amadivayisi e-Blackberry ne-Windows lungabanzi njengalawo asebenza nezingcingo ze-Apple ne-Android, usengakhetha phakathi kwalawo akunikeza imidlalo ehlukahlukene yasekhasino ongayijabulela kuselula yakho ehlakaniphile noma kuthebhulethi yakho nomaphi.
Imidlalo Ongayikhetha Emakhasino Eselula
Ungaqiniseka ukuthi ungadlala ama-reels, ugingqe idayisi noma udlale amakhadi njengokungathi usekhasino langempela noma le-inthanethi ngokushesha nje lapho uqala ukudlala ekhasino yeselula oyithandayo. Ngokutholakala kalula kwayonke imishini yokugembula eminweni yakho, amakhasino eselula akunikeza isipiliyoni sangempela sekhasino ngenkathi usohambeni. Kutholakala zonke izinhlobo zemishini yokugembula kubandakanya ejwayelekile, yevidiyo, naleyo ekunikeza isizumbulu semali eguqula impilo, i-poker yetafula neyevidiyo, konke kungajatshulelwa noma nini nanomaphi lapho ukhona.
Zama imishini yokugembula (slot) ukubona ukuthi ingakuzuzisa kangakanani ngazo zonke izici zebhonasi ezikusiza ukuthi uthole ukukhokhelwa okuphezulu noma uthathe ithuba lakho nge-blackjack noma i-roulette ukuwina okukhulu. Ububanzi bokubheja obunikezwa yimidlalo yekhasino buvumela zonke izinhlobo zabadlali ukuthi zizame inhlanhla, ngakho-ke ungahlula abanye abadlali ngenkathi usebhishi noma usebenzisa izithuthi zomphakathi inqobo nje uma unokuxhumeka kwe-inthanethi okuhle. Kodwa-ke, ukuthola isipiliyoni sangempela sekhasino yomhlaba enikezwa yimidlalo yetafula enabadayisi ababukhoma, kumele udlale ezindaweni zokugembula eziku-inthanethi, ngoba azitholakali kumakhasino eselula.
Izindlela Zokukhokha Emakhasino Eselula
Uma uthola ikhasino elikufanela kakhulu futhi elamukela i-ZAR, qinisekisa ukuthi ukhetha indlela yokukhokha elula kunazo zonke. Amakhasino eselula asekela inqwaba yezinhlobo zokubhenka eziphephe ngokuphelele zokuthi udiphozithe noma ukhiphe imali.
Ngokusebenzisa ubuchwepheshe bokuphepha obuthuthukile njengokufakwa kwe-SSL, amakhasino eselula avikela yonke imininingwane yakho ebucayi nokudayiselana ukuze ukwazi ukukhokha ngokukhululekile futhi ukhiphe imali oyitholile ungakhathazekile ngokuphepha kwayo.
Izici zokubhenka ezisekelwayo zibandakanya amakhadi esikweletu noma e-debit, ama-e-wallet, ukudlulisa imali ngebhange kanye nezindlela zokukhokha zakuleli. Ungasebenzisa i-Visa noma i-Mastercard yakho, ama-e-wallet afana ne-Skrill, i-Neteller, noma i-EcoPayz, noma i-SID Instant EFT eyenzelwe kuphela abadlali baseNingizimu Afrika abangasebenzisi amakhadi esikweletu. Konke ukukhokha kwakho kungenziwa ngeselula yakho ekuvumela ukuthi ukhokhele i-akhawunti yakho ngenkathi usohambeni.
Ngaphambili kokudiphozitha noma ukukhipha imali yakho, thola lonke ulwazi oludingekayo ngezindlela zokukhokha mayelana nezindleko nangesikhathi esidingekayo sokucubungula ukudayiselana kwakho ngoba kungahlukahluka. Ama-e-wallet asebenza njengesixhumanisi phakathi kwe-akhawunti yakho yasebhange neyekhasino angezinye zezindlela ezilula kakhulu ukusebenzisa njengoba ukudayiselanaa ngazo kumahhala kodwa ukukhipha imali kungathatha amahora angu-72.
Ngakolunye uhlangothi, ukukhipha imali kusikhwama sakho usebenzisa ezinye izindlela zokubhanga ezifana nokudlulisa imali ngebhange kungabiza futhi kuthathe amasonto angu-4.
Ukukhetha Ikhasino Yeselula Ekufanele
Uma ikhasino ye-inthanethi oyikhethayo inikeza ikhasino yeselula, isinyathelo esilandelayo esinengqondo ukuzama imidlalo yalo bese ubona ukuthi ujabulile yini ngaleso sipiliyoni. Ukufunda ukubukeza kwemidlalo nokuvivinya imidlalo embalwa zindlela ezingcono kakhulu zokubona ukuthi leyo khasino ethile yeselula izohambelana yini nezidingo zakho noma cha.
Uma ngabe ikhasino yeselula ivumelana nekhasino ye-inthanethi, izici ezifana nokudiphozitha imali, ukukhipha imali, amaphoyinti okuthembeka, namabhonasi amanje kufanele kusebenze ndawonye kungenankinga.
Ungesabi ukuzama ikhasino entsha yeselula uma ungajabulile ngaleyo oyinikezwayo evela kukhasino ye-inthanethi oyithandayo. Abadlali abaningi bakhetha ukubhalisela amakhasino ahlukile ukuthola isipiliyoni esingcono kakhulu kunoma iyiphi idivayisi abakhetha ukudlala kuyo.
Amathiphu Okukusiza Ukhethe Ikhasino Yeselula Ekufanele:
Ingabe awunaso isiqiniseko sokuthi iyiphi ikhasino ehamba phambili ekulungele njengomdlali waseNingizimu Afrika? Nazi izici ezimbalwa ezingakusiza ukhethe.
Imidlalo ehlukahlukene ongakhetha kuyo kufanele itholakale kudivayisi yakho yeselula. Uma kuningi ongakhetha kukho kusho amathuba amaningi okuhlola ikhono lakho nenhlanhla.
Kufanele uhlale ukwazi ukudiphozitha imali ngamaRandi (ZAR). Ukukwazi ukusebenzisa imali ojwayelene nayo kusho amathuba amancane okuyisebenzisa ngokweqile.
Usizo lwamakhasimende lwakuleli oluhamba phambili lubaluleke kakhulu. Uma ungathandi ukushayela umuntu ucingo, kuvame ukuba Nengxoxo Ebukhoma etholakalayo.
Qinisekisa ukuthi ufunde ukubukeza kwamakhasino nokuthi ikhasino yeselula oyikhethayo izobe iphephile futhi ngaphezulu kwakho konke okunye, iyakujabulisa!